Cabo Verde Airlines dia mamoaka paikady vaovao ho an'i Boston
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cabo Verde Airlines dia mamoaka paikady vaovao ho an'i Boston
miaraka Seranam-piaramanidina iraisampirenena Boston Logan iray amin'ny be mpampiasa indrindra any Etazonia, miaraka amina mpandeha 40.9 tapitrisa notanterahina tamin'ny taona 2018, ary miaraka an-tranon'ny vondrom-piarahamonina midadasika any Cape-Verdean ny tanàna, dia manana andraikitra lehibe ny tanàna Seranam-piaramanidina Cabo Verde'drafitra fanitarana stratejika ho an'i Amerika Avaratra.
Manidina tsy tapaka avy any Boston mankany Praia (Cabo Verde) amin'izao alatsinainy izao, ny CVA dia te-ho zotram-pifandraisana ho an'ny Amerikanina tonga aty Afrika sy ho an'ny Diaspora Afrikana any Etazonia.
Azo atao izany amin'ny alàlan'ny foiben'ny CVA ao amin'ny Nosy Sal, izay misy ny zotram-piaramanidina mankany amin'ny toerana hafa any Cape-Verdean ary koa ny tanàna afrikanina Andrefana, toa an'i Dakar sy Lagos, any Nizeria, izay hanomboka amin'ny 9 desambra miaraka amin'ny sidina dimy in-kerinandro. Ny hub'ny CVA dia manome toky ihany koa ny sidina mankany Lisbon (in-dimy isan-kerinandro), Milan (inefatra isan-kerinandro) Paris sy Roma (intelo isan-kerinandro), ary ireo toerana hafa any Brezila.
Jens Bjarnason, tale jeneraly sady filohan'ny Cabo Verde Airlines, dia nilaza hoe: “Tanàna fanta-daza ho an'ny vondrom-piarahamonina Cape-Verdean i Boston, ary faly indrindra izahay eto. Izahay dia mijery ity fifandraisana ity miaraka amin'ny fankasitrahana lehibe, satria ny fifandraisana misy eo amin'i Cabo Verde sy i Boston dia manana tantara lehibe. ”
Ny CEO dia hanolotra ny paikady vaovao ho an'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, amin'ny 16 Novambra, ao amin'ny Consulat Général de Cabo Verde any Boston, izay hanambarana ny paikady vaovao any Boston sy ireo zotra ho avy.
Cabo Verde Airlines, teo aloha TACV - Transportes Aéreos de Cabo Verde, dia nandalo dingana fanarenana, izay fananan'ny Fanjakana Cabo Verde 49% ary 51% an'i Loftleidir Cabo Verde.
UNWTO: Fizahan-tany mitarika sehatra hafa manerantany amin'ny fampandrosoana ny fitovian'ny miralenta
Lufthansa dia niresaka tamin'ny sendika satria misy sidina 1,300